अर्बौंको कम्पनी निर्माण गर्ने ३१ वर्षीय दृष्टिविहीन सीईओको अमेरिकादेखि अदालतसम्मको संघर्ष कथा « Khasokhas Follow @khasokhasmag
श्रीकान्त बोल्ला अर्बौंको कम्पनी निर्माण गर्ने दृष्टिविहीन सीईओ हुन । आफ्नो बलबुतामा यी युवा सीईओले ४८ मिलियन पाउण्ड अर्थात करिब ४८३ करोड रुपैयाँको कम्पनी बनाए तर यो त्यति सजिलो थिएन । यी मेहनती युवाको जीवनीमा छिट्टै बलिउड फिल्म बन्ने भएको छ ।
भारतको ग्रामीण भेगमा बस्ने श्रीकान्त ६ वर्षका हुँदा लगातार दुई वर्षसम्म हरेक दिन केही किलोमिटर पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्थे। आफ्ना सहपाठी र भाइको सहयोगमा श्रीकान्त दैनिक यात्रा गर्दथे ।
विद्यालय जाने बाटो हिमालय क्षेत्रको थियो, दुवैतिर झाडीले घेरिएको र बर्खामा बाढी आउँदा झनै गाह्रो हुन्थ्यो । श्रीकान्त भन्छन्, ‘म देख्न नसक्ने भएकाले मसँग कसैले कुरा गर्दैनन्।’
गरिब, अशिक्षित परिवारमा जन्मेका श्रीकान्तलाई उनको समुदायले पनि बहिष्कार गरेको थियो। उनी भन्छन्, ‘मेरो घरमा कुकुर पसे पनि देख्न नसक्ने भएकाले घरको सुरक्षा गर्न नसक्ने भनी मेरा अभिभावकलाई भनिएको थियो । आफ्नो पीडादायी अनुभवलाई सम्झँदै ३१ वर्षीय श्रीकान्त भन्छन्,’धेरै मानिसहरू मेरा आमाबुवाकहाँ आएर सिरानीले थिचेर मलाई मार्ने सल्लाह दिन्थे।’
मानिसहरूको कुरालाई बेवास्ता गर्दै, श्रीकान्तका आमाबाबुले सधैं आफ्नो बच्चालाई समर्थन गरे। जब उनी आठ वर्षको भए, श्रीकान्तका बुबाले भने कि उनीसँग राम्रो खबर छ। श्रीकान्तले दृष्टिविहीनहरूको लागि बोर्डिङ स्कूलमा भर्ना भए र यसका लागि उनलाई आफ्नो घरबाट करिब ४०० किलोमिटर टाढा रहेको हैदराबाद सहर जानुपरेको थियो।
उनी आफ्नो भविष्यको बारेमा पनि सचेत थिए। उनी सधैं इन्जिनियर बन्ने सपना देख्थे र उनलाई थाहा थियो कि यसका लागि विज्ञान र गणित पढ्न आवश्यक छ। जब समय आयो, श्रीकान्तले यी कठिन विषयहरू छनोट गरे तर स्कूलले यसलाई गैरकानूनी भन्दै अस्वीकार गर्यो। श्रीकान्तको स्कूल आन्ध्र प्रदेश राज्य शिक्षा बोर्ड अन्तर्गत थियो र त्यहाँ एक दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई विज्ञान र गणित पढ्न अनुमति थिएन।
श्रीकान्तलाई भनियो “गणित र विज्ञान पढ्न सक्दैन किनभने ऊ दृष्टिहीन छ ।” यसपछि श्रीकान्तले यो मुद्दा अदालतमा लगे र फैसला उनको पक्षमा आयो ।
श्रीकान्त र एक शिक्षक यस नियमबाट असन्तुष्ट थिए । आफ्ना विद्यार्थीलाई यसविरुद्ध केही कारबाही गर्न प्रोत्साहित गरे। दुबै आन्ध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्डमा आफ्नो मुद्दाको वकालत गर्न गए, तर यसबारे केही गर्न नसकिने भनिएको थियो।
बिना डर ​​अघि बढ्दै, शिक्षक र विद्यार्थीको यो जोडीले एक वकिल पाए। त्यसपछि, विद्यालय व्यवस्थापन टोलीको सहयोगमा, दुवैले आन्ध्र प्रदेशको उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे, जसले दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूलाई गणित र विज्ञान पढ्न अनुमति दिन शिक्षा कानूनमा परिवर्तन गर्न अपील गरे। श्रीकान्त भन्छन्, ‘हाम्रो तर्फबाट वकिलले अदालतमा लडे । विद्यार्थी आफैं अदालतमा उपस्थित हुनु आवश्यक थिएन।
उनी विगत सम्झँदै भन्छन् ‘जीवनमा हरेक कुराका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । सबैले म जस्तो लड्न नसक्ने वा सबैले म जस्तो गुरु पाउन नसक्ने अवस्था थियो । पढाइपछि सामान्य जागिरको विकल्प पनि हुनुहुँदैन ।’
श्रीकान्तले अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा आवेदन दिए र पाँचवटा प्रस्ताव प्राप्त गरे। श्रीकान्तले क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट्समा एमआईटी रोजे जहाँ उनी पहिलो दृष्टिविहीन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी थिए। श्रीकान्त २००९ मा त्यहाँ पुगेका थिए र आफ्नो प्रारम्भिक अनुभवलाई ‘मिश्रितु भनेका थिए।
श्रीकान्त भन्छन्, ‘MIT मा बिताएको समय मेरो जीवनको सबैभन्दा मीठो पल हो। पढाइको स्तरमा यो धेरै गाह्रो थियो। तर विश्वविद्यालयले मलाई त्यहाँ रहन र मेरो सीपलाई सुधार्न मद्दत गर्यो।’
श्रीकान्तको जीवन राम्रै चलिरहेको थियो । एमआईटीबाट म्यानेजमेन्ट साइन्स पढेपछि उनलाई धेरै कामका अफर आए तर उनले अमेरिकामा नबस्ने निर्णय गरे । श्रीकान्तको स्कुलको अनुभवको निशान उनको दिमागबाट मेटिएको थिएन। उनलाई सधैं आफ्नो देशमा आफ्नो काम अधुरो महसुस हुन्छ ।
श्रीकान्त सन् २०१२ मा हैदरावाद फर्किए ‘बोलेन्ट इन्डस्ट्री सुरु गरे। यो एक प्याकेजिङ कम्पनी हो जसले पर्यावरण-मैत्री उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछ। यस कम्पनीमा धेरै कामदार अपाङ्गता भएका र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू कार्यरत छन्। कोरोना महामारीअघि कम्पनीका ५०० कर्मचारीमध्ये ३६ प्रतिशत त्यस्ता व्यक्ति थिए ।
गत वर्ष, ३० वर्षको उमेरमा, श्रीकान्तलाई वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको युवा ग्लोबल लिडर्स २०२१ को सूचीमा समावेश गरिएको थियो। श्रीकान्तले आशा गरे कि तीन वर्ष भित्र उनको कम्पनी बोलन्ट इन्डस्ट्रिज ग्लोबल आईपीओ बन्नेछ, जहाँ यसको शेयर एकै साथ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जहरूमा सूचीबद्ध हुनेछ।
श्रीकान्त भन्छन्, ‘जब म कसैलाई भेट्छु, मानिसहरू सोच्छन् ! अरे यो अन्धा हो !! कति दुःखी तर म को हुँ र म के गर्छु भन्ने बित्तिकै सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ।’
श्रीकान्तमाथि बलिउड फिल्म पनि बन्ने भएको छ । प्रख्यात अभिनेता राजकुमार रावले यस फिल्ममा श्रीकान्तको भूमिका निभाउनेछन् र यसको सुटिङ जुलाईमा सुरु हुनेछ। बिबिसिबाट